Abakhiqizi Bokuhlaziya Izitini & Abaphakeli - Ifektri Yezitini Echazayo Yase-China
Izitini ze-Acid Proof
I-Acid proof tile ingasetjenziswa ukomisa umbhoshongo wefekthri yamakhemikhali, ifektri yomanyolo kanye nefektri ye-sulfuric acid, i-liner ye-Reoror etholayo, i-liner yedamu lokulwa nokulwa nezifo, izikejana, iziteshi, nokubekwa kwephansi yokulwa ne-acid.
I-Fire Clay Refractory Brick
Isayizi ejwayelekile: 230 x 114 x 65 mm, usayizi okhethekile kanye ne-OEM Service nayo inikezela!
Ubungako bucacile, bunikeza izinhlobo zezimo ngokuya ngomdwebo weKhasimende.
Izitini ze-alumina eziphakeme zenziwe ngobumsulwa obuphakeme kanye ne-spinel ezinzile enokuqukethwe kwama-alumina angaphezu kwama-48% ngomfutho ophakeme nangokona okuphezulu. Ukuqina okushisayo, ukuphinda okuphezulu ngaphezulu kwe-1770 ℃.
Magnesia Carbon Refractory Izitini Zomlilo
Imiphi imininingwane yezitini zethu zembozo ekhishwa nge-Magnesia carbon?
1. IMagnesia Carbon isitini isitini esine-bonded eyenziwe nge-magnesia efile noma eshisiwe.
2. Kufakwa i-ox -ant uma kudingeka.
I-Refractory Semi-graphite Carbon Brick
Izitini Eziphikisayo ZaseSilica
Izinga eliphakeme le-silica isitini lenziwe ngezinto eziluhlaza ze-silicon, okuqukethwe kwe-SiO2 kungaphezulu kwama-91%. Futhi okuqukethwe kwe-Al2O3 kungaphansi kwe-1,0%.
Usayizi okhethekile ukuphakama okuyisisekelo ukuphonsa isitini sensimbi
Imikhiqizo yensimbi eyakhiwe ngezitini yensimbi esetshenziswa ezinhlotsheni ezahlukahlukene zensimbi, insimbi engaguquki nensimbi eyisicaba ethela lonke isitini esenziwe kahle, isitini samapayipi, amathayela, isikhungo, ngesitini sensimbi eyakhiwe ngezitini, isitena somgodi owodwa, izindlela ezimbili ezenziwe ngezitini zensimbi izitini zomsila wensimbi kanye ne-ingot isikhu kufa ezansi kwezitini, imikhiqizo enokumelana nomlilo ophakeme, ukumelana nokuqhekeka nokuqunjelwa ukuguguleka, ukubukeka okuvamile, iqhwa elibushelelezi, usayizi oqondile, i-Various ephelele, izitini zensimbi eziphonswe ngokuya ngezinhlinzeko zezinhlobo zezwe nokucaciswa kwe ukukhiqizwa, ngokuya ngezidingo ezikhethekile zokuqhutshekiswa phambili.